ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး အတွက် ထိရောက် တဲ့ နာနတ် သီး အသုံး ဝင် ပုံ…. – Shwe Yoe
ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး အတွက် ထိရောက် တဲ့ နာနတ် သီး အသုံး ဝင် ပုံ….
Shwe S N | July 12, 2021 | Knowledge | No Comments
ကိုဗစ် မဖြစ်အောင် နာနတ်သီး စားရမလား?Australia က သိပ္ပံပညာရှင်တွေက နာနတ်သီး အူတိုင်မှာပါတဲ့Bromalin ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းဟာ covid virus ရဲ့ spike
ကို ပျက်ဆီးစေပြီးက ကိုဗစ် ဗိုင်းရပ်ကို နှာခေါင်းကနေ အဆုပ်ထဲ မဝင်အောင်တားဆီးပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆေးအနေနဲ့ နာနတ်သီး extract “BromAc” ထုတ်ထားတယ်
လို့ အင်တာနက်မှာ ပြန့်နှံနေပါတယ်။
၁။ WHO က ကိုဗစ်ဖြစ်သူတွေကို အသီးအနှံ လုံလောက်စွာ စားသုံးဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် စီ ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးတမျိုးဖြစ်တဲ့နာနတ်သီး စားရင် ကိုယ်ခံအား တက်စေလို့ WHO က စားဖို့ ည်ှန်ကြားချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အသီးပါ။ စားသုံးရင် အန္တာရာယ် မရှိဘဲ တခြားကျန်မာရေးအကျိုးများ ရှိနေပါတယ်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာနတ်သီး‌‌ပေါ်တဲ့ ရာသီ ဖြစ်နေလို့ ဈေးသက်သာပြီးနေရာတကာ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ လက်လီဈေး ၃ လုံးကို တဒေါ်လာထက်နည်းတဲ့ ဈေးနဲ့ ဝယ်လို့ ရနေပါတယ်။
၃။ ကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့ တရုတ်ကို ပို့မရလို့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ အလျှံပယ်ဖြစ်နေပြီး နာနတ်စိုက်တဲ့ တောင်သူတွေ ဈေးကျပြီး စီးပွားပျက်မဲ့ အန္တာရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
၄။ အခု ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းနဲ့ ကြုံနေတော့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မူလုံလောက်အောင် မဖြည့်ဆီး ပေးနိုင်သေးခင် ဗိုက်တာမင် စီများတဲ့နာနတ်သီးတော့ စားသင့်ပါတယ်။ ဆီးချိုရှိတဲ့သူတွေတော့ နာနတ်သီး အူတိုင်ကို စားပေးပါ။ပြောခဲ့တဲ့ အချက်လေးချက်နဲ့တင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နာနတ်သီးကို နေ့စဉ်အနည်းဆုံး တစိတ်စီလောက် စားသင့်နေပါပြီ။
၅။ ‌ဆေးထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက ကြောငြာတဲ့ BromAc က စနစ်တကျ စ်မးသပ်ထားတာ မှန်ပေမဲ့ အားဖြည့်စာ dietary supplement အဖြစ်ရောင်းဖို့က ပိုနီးစပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက Fame ဆေးဝါးစက်ရုံကလည်း နာနတ်သီးဆေး Bromalin ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ဘဲ ထုတ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကလည်း အခု ကိုဗစ်ကာလ မတိုင်ခင်ကတည်းကနာနတ်သီးရဲ့တခြား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျိုးများကြောင့် ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ ဆီးချိုရှိတဲ့သူတွေအတွက် ရွေးချယ်နိုင်တာ တခုပါ။)
ကိုဗစ်ကုသဖို့ ဆိုရင် သိပ္ပံပညာရှင်အများစုနဲ့ WHO တို့က လက်ခံအောင်လေ့လာမူတွေ လုပ်ဖို့ လိုအုံးမယ် ထင်ပါတယ်။ WHO ဆီက ကိုဗစ်ကုသဖို့တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် ရဖို့ဆိုတာအချိန်ကြာနိုင်ပါသေးတယ်။ မြန်မာကို တင်သွင်းဖို့ဆိုရင် ပိုတောင် အချိန်ယူရမှာ ဖြစ်ပြီး ဈေးကြီးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကိုဗစ်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ Bromalin ပါတဲ့ ဆေးကို မျှော်နေမဲ့အစား လောလောဆယ် နာနတ်သီးက ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးမှာအထောက်အကူပြုတာကိုဘဲ လက်ခံပြီး၊ စားသင့်တဲ့ ဗိုက်တာမင်စီ ကြွယ်ဝတဲ့သီးနှံထဲမှာ ကိုဗစ်ပျောက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ပါရှိ‌နေတဲ့ နာနတ်သီးဟာ စားဖို့ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေလို့ နေ့စဉ် တစိတ်၊ နှစ်စိတ်လောက် စားသုံးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါ။
တကယ်လို့ ကုမ္ပဏီကပြောသလိုBromalin ရဲ့ အစွမ်းက ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ လူသားတွေ ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွေရဲ့ ကုသိုလ်ကံ‌ကောင်းတယ်လို့ဘဲ ‌‌ပြောရမှာပါ။
ပိုစားရန် မလိုပါ။ တယောက်ကို တခါစား တလုံး နှစ်လုံးစားရင် နာနတ်သီး ဈေးတက်ပြီး ဝယ်မရဖြစ်သွားရင် စားခွင့်မရတဲ့သူ များပြီး ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တယောက်ထဲရောဂါ မကူးလို့ မရပါဘူး။ နိုင်ငံတွင်းက လူတိုင်း ရောဂါ မဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
၁။ ကိုဗစ် အကြီးအကျယ် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်
၂။ နာနတ်သီး ပေါ်ချိန်၊ နာနတ်သီး ဈေးပေါချိန် ၊အလွယ်တကူ ရတဲ့ အချိန်
၃။ နာနတ်သီး က ကိုဗစ် ကုသဖို့ ဖြစ်နိုင်‌ခြေရှိတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ဖတ်မိသူက ရေးသားပြီး ပြန့်နှံတဲ့ အချိန် တို့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ သဘာဝတရားကဖန်တီးတယ်ဘဲ ပြောမလား၊ ဘုရားက ဖန်တီးပေးတယ်ဘဲ ပြောမလား။ တိုက်ဆိုင်နေတာတော့ အမှန်ပါ။ အဲဒီလောက်တိုက်ဆိုင်နေတာကို မိတ်ဆွေအနေနဲ့ တာဝန်ကျေအောင်
နာနတ်သီးကို လိုသလောက် စား၊ သူတပါးကိုလည်း စားဖို့ တိုက်တွန်းဖို့ လိုပါတယ်။ တလ၊နှစ်လလောက် ကူးစက်မူကို ထိန်းထားနိုင်ရင် ကပ်ဘေးတောင် ကျရှယ်ပေးပါနာနတ်သီး စားသုံးခြင်းဟာ မျှော်လင့်ချက် တခုပါ။တွေးမိတွေးရာပါ။
ရေးထားတာ သဘောတူရင် ရှယ်ပေးပါ
ကိုဗစ် မျဖစ်အောင် နာနတ်သီး စားရမလား?Australia က သိပ္ပံပညာရွင်တြေက နာနတ်သီး အူတိုင္မွာပါတဲ့Bromalin ဆိုတဲ့ ဓာတ္ပစ္စည်းဟာ covid virus ရဲ့ spike
ကို ပ်က္ဆီးစေပြီးက ကိုဗစ် ဗိုင်းရပ္ကို နွာခေါင်းကေန အဆုပ္ထဲ မဝင်အောင္တားဆီးပေးတယ္လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆေးအေနနဲ့ နာနတ်သီး extract “BromAc” ထုတ္ထားတယ်
လို့ အင္တာနက္မျွာပန့္နွံနေပါတယ်။
နောက္က link မွာဖတ္ပါ။
ဆက်ဆီကျပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်း လို့. နာမည်ကြီးနေ တဲ့ လေယာဉ်မယ်လေး
အသံဝင်ပြီး လည်ချောင်း နာတာမျိုး ဖြစ် ခဲ့ ရင် အိမ်တွင်း နည်းလမ်းနဲ့ ကုနည်း
အခေါင်းထဲကနေ အော်ဟစ်နိုး ထ လာပြီးနောက် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်သေဆုံးသွား တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်…
အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆံပင်ဖြူနေ ရင် လုပ် သာကြည့် လိုက် ပါ